अनुहारमा भूलेर पनि नलगाउनुहोस् यी चीज, सुन्दर बन्ने चक्करमा बनिएला कुरुप – Online Nepal Site
लाहुरेको परिवार मिलाउने सन्तोष देउजाको पूर्व प्रेमिका रहेको खुलाशा (भिडियो सहित)
चर्चित भारतीय गायिका श्रेया घोषाल आमा बन्दै, सुटुक्क बिहे गरेकी श्रेयाले सार्वजनिक गरिन् यस्तो तस्वीर
तपाइको अनुहारमा चाउरीपना छ ?अनुहारको चाउरीपन हटाउन यी घरेलु उपाय अपनाऊनुहोस !!
नायिका झरना थापाकी डुब्लिकेट, जसले गर्छिन् झरनाको जस्तै अभिनय, कतिपय त झरना नै भनिए झुक्किए, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
महिलाहरु अरूबेला भन्दा धेरै चहान्छन यो बेला,….
फिटकिरीले रातारात बदलिदिन सक्छ तपाईको भाग्य, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग….
मुख्य पृष्ठ /Tips/अनुहारमा भूलेर पनि नलगाउनुहोस् यी चीज, सुन्दर बन्ने चक्करमा बनिएला कुरुप
अनुहारमा भूलेर पनि नलगाउनुहोस् यी चीज, सुन्दर बन्ने चक्करमा बनिएला कुरुप
1,049 1 minute read
हामीले फेसियल गर्ने त भन्छौँ, तर यस्तो फेसियल कस्तो हुन्छ, कति प्रकारका हुन्छन्, कस्तो छालामा गर्ने भन्ने जानकारी हुनुपर्छ। तर जुन अनुहारमा धेरै मेकअप गरिन्छ, छालामा समस्या छ र धेरै फोहोर छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाँडो फेसियल गर्नुपर्छ ।
फेसियल गर्दा राम्रो जानकारी नहुँदा हामीले झन अनुहारलाई बिगारी रहेको हुन्छौँ । त्यसैले आज हामी तपाईलाई अनुहारमा सिधै प्रयोग गर्न नहुने केही चिजका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । यो सामाग्री ब्युटिसियनसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो।
अनुहारमा नलगाउनुहोस् यी चीज
१) कागती-यसमा पाईने साइट्रीक एसिडले अनुहारको चमक कम हुन्छ । जसले छालाको कालोपन बढाउँछ ।२) सिरका-भिनेगरमा एसिड हुन्छ । यसलाई पानीमा नमिलाएर अनुहारमा सिधै लगाउँदा छालाको ओयल कम हुन्छ र कालोपन बढ्छ ।३) बियर-बियरको एसिडिक नेचरले छाला सुख्खा हुन्छ । यसलाई दिनहुँ प्रयोग गर्नाले छालाको चमक कम हुनथाल्छ।
४) बेकिंग सोडा-यसमा पाईने अल्केलाइड्सले छालाको पीएच लेभल सन्तुलित रहँदैन । यसले छालामा दाग-धब्बा बन्छ र चमक कम हुन्छ ।५) पुदिना-यसमा मेन्थोल हुन्छ । यसले अनुहारको नरमपन कम गर्छ र कालोपन बढ्छ ।६) सुन्तला-सुन्तला र यसको बोक्रामा साइट्रीक एसिड हुन्छ । यसले छालाको रंग कालो हुन्छ ।
शुक्रबार लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पूजा गर्नाले मिल्छ यस्तो लाभ (पूजाविधि सहित)